Ajay Tamang – Page3– Nepal Reports
३८ क्वीन्टल सुन र बाजेको सेकुवा !!!
LeaveaComment / News, Society / By Ajay Tamang
जेठ ३०, ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको विशेष अनुसन्धान समितिले काठमाडौंकाे विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्टमा छापा मारेको छ । स्रोतका अनुसार अनामनगर, स्रोहखुट्टे, सामाखुसी, बत्तिसपुतली, कमलपोखरी र गैरीधारास्थित बाजेको सेकुवाको शाखामा छापा मारेर शिलबन्दी गरिएको हो । रेस्टुरेन्टका मालिक चेतन भण्डारी फरार छन् । उनलाई फरार प्रतिवादी बनाएर सुन तस्करीमा जिल्ला अदालत, मोरङमा …
३८ क्वीन्टल सुन र बाजेको सेकुवा !!!Read More »
जन्मघर पुगेर फर्किएपछि डा. उपेन्द्र देवकोटा बोल्न नसक्ने भए
जेठ ३०, शनिबार गोरखास्थित जन्मघर पुगेर फर्किएपछि वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा बोल्न नसक्ने भएका छन् । क्यान्सर पीडित डा. देबकोटाको बाँसबारीको न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शनिबार राति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मृत्युको खबर फैलाएपछि अस्पतालले अनावश्यक विषयका पछि नलाग्न र अस्पतालको आधिकारीक जानकारी लिन आग्रह गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । सोही …
जन्मघर पुगेर फर्किएपछि डा. उपेन्द्र देवकोटा बोल्न नसक्ने भएRead More »